Mesut Ozil oo jawaab lama filaan ah Twitter-kiisa kaga bixiyey in laga reebay gabi ahaan safkii kooxda Arsenal ee xalay guuldarrada kala soo laabtay Man City – Gool FM
(London) 18 Juun 2020. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Arsenal Mesut Ozil ayaa baraha bulshada soo beegsaday isagoo jawaab lama filaan ah bartiisa Twitter-ka kaga bixiyey in gabi ahaanba laga reebay safkii kooxda Arsenal ee xalay guuldarrada kala kulmay Manchester City.
Mesut Ozil ayaa muujiyey inuu weli jecel yahay Arsenal, inkastoo macallin Arteta uu sheegay in sabab la xiriirta arrimaha taatikada uu xiddigan kaga reebay xiddigihii uu ula saftay Etihad ee guuldarradu ay xalay ka soo gaartay Sky Blue.
Waxa ay Gunners guuldarro 3-0 kala soo laabatay kooxda uu hoggaamiyo Pep Guardiola ee Manchester City inkastoo Arsenal kaarka cas uu ka qaatay David Luiz.
Go’aankaas uu qaatay tababare Arteta kaga soo tagay xiddiga reer Jarmal ayaa dad badan ka yaabisay, iyadoo arrintaasi ay dab ku sii shidday wararka xanta ee xiddigan la xiriirinaya inuu ka tagayo xagaagan naadiga Gunners.
Yeelkeede Ozil waxa uu xusay inuu doonayo inuu dhammaysto heshiiskiisa uu ku joogo garoonka Emirates.
Ozil ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu soo dhigay sawir uu gacanta ku hayso calaamadda kooxda Arsenal, waxaana uu soo raaciyey qoraal u dhignaa: “Wax walba oo dhaca… #M10 @Arsenal”.
Waxa uu Ozil geli doonaa sanadkii ugu dambeeyey ee qandaraaskiisa qaaliga ah ee garoonka Emirates, isagoo horay u sheegay inuusan garanaynin waxa dhici doona mustaqbalka, balse hadda waxa uu Twitter-kiisa ku muujiyay inuu weli jecel yahay Arsenal wax walba oo dhaca.